ROOSEETO LOO HELAY RAGGA KACSIGA BADAN | Gaaloos.com
Home » Layaab » ROOSEETO LOO HELAY RAGGA KACSIGA BADAN
ROOSEETO LOO HELAY RAGGA KACSIGA BADAN
Company laga leeyahay wada Mareekanka ayaa markii ugu horeysay waxa uu ku guuleystay in xal uu u helo ragga la sheego in ay ka hor biya baxaan dumarka taa oo ugu danbeyntii khilaaf uu ku dhamaado ciyaartii ka socotay sariirta daqiiqado ka hor.
Rooseetadaan ayaa ah mid si deg deg ula qabsaneyso jirka ninka ka dib shumiska ugu horeeya ee uu xaaskiisa uu ku qabto ama uu ku dhufto ayadoona wax ka yar 2 second ay la fal galeyso dhamaan jirkiisa taa oo sabab u noqon karta ugu danbeyntii in uu si awood leh uu ku dhameysto wareegyo badan oo ka dhici lahaa sariirta.
Company-ga ayaa tijaabadaasi ku sameeyay ilaa 2,000 oo ruux kuwaa oo soo wada amaanay
waxaana la ogaaday in ragga biya baxooda uu sahlanyahay ay u sabab tahay dhibaatooyin dhanka Galmada ka heysta haba ugu horeeyee Infection ku dhac ninka oo ugu danbeyntii sababa in xitaa uu noqdo madhaleys sida lagu sheegay daraasad sanadii hore ay sameysay Jaamacada Boston ee dalka Mareekanka.
Kacsiga ama dareenka Jinsiga ayaa ah wax inta badan maaaro loo helo ayadoona maareheeda ugu weyn uu yahay in la helo haweeneey la kowsata dareenkaasi lana dhameysata si wanaaga sariirta uu u sii bato,
waxa ayna ka mid noqoneysaa rooseetadaan tiro daawooyin oo lagu doonayay in lagu xaliyo ragga biya baxa dhow ee aduunka ku nool.
Title: ROOSEETO LOO HELAY RAGGA KACSIGA BADAN